Filoham-pirenena : Manana andraikitra amin’ny fisandratana ny mpanabe -
AccueilSongandinaFiloham-pirenena : Manana andraikitra amin’ny fisandratana ny mpanabe
Filoham-pirenena : Manana andraikitra amin’ny fisandratana ny mpanabe
31/03/2018 admintriatra Songandina 0
Ankoatra ny fiofanana nomena ireo sefo zap avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, dia noraisin’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ihany koa ireto mpampianatra 1 769 ireto, omaly, mba hampaherezana azy ireo amin’ny asa sarotra izay iantsorohan’izy ireo nefa asa masina, fa indrindra, nizaran’ny Filoha ny mahakasika ny vina ny fisandratana 2030 entina hampandrosoana ny firenena. Satria tsy mpampianatra fotsiny ihany ny sefo zap fa mpanabe ihany koa, ka manana andraikitra lehibe amin’ny fampisandratana ny firenena miaraka amin’ny Filoham-pirenena, hoy ny nambarany.
“ Hotohizantsika ny fisandratana satria tsy vao androany ny Filoha no niresaka fisandratana fa efa taona maromaro. Efa taona vitsivitsy no niasany tao anatin’izany fisandratana izany. Tohizana izany asam-pisandratana izany, ary tsy avelany raha tsy misandratra miaraka aminareo. Kendrena ny fisandratana ara-toekarena, ara-bola raha hiady amin’ny fahantrana entina hanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy, fa ny lehibe izay tsy azo sarahina aminy ny fahaterahana. Isan’izany ny fahaterahana toe-tsaina vaovao, fahaterahana toetra vaovao, fomba fijery vaovao ary ny fahaterahana fomba fiasa vaovao hanatanterahana ny fampandrosoana ny fisandratan’i Madagasikara. Izay vina entina mampandroso ara-toekarena sy manova an’i Madagasikara, no tiako hozaraina aminao”, hoy ny Filoha.
Mba hahatongavana amin’izany anefa, ilaina ny fahasahiana sy ny finiavana ary vonona amin’izany ny Filoha, Rajaonarimampianina ka nitarika ireo mpanabe maro be hanampy azy amin’izany ny tenany, satria tsy vitan’ny olon-tokana ny fanovana ny firenena, indrindra ny fanovana ny toe-tsaina, ny fampandrosoana ny firenena.“Hanova isika, hanova ianareo. Tsy avelantsika raha tsy miova ity firenena ity. Ary niteny aho hoe, hanova aho dia misy finiavana izay ny Filoha hitarika anareo amin’ny fanovana. Fa misy finiavana ilaina sy takiana aminareo koa hitondrana izany fanovana izany”, hoy hatrany ny teniny, ary mbola nitohizana manao hoe, “sahia manova fa mila asa ny fanovana, ary ny mpanabe dia isan’ny fototra hitondra ny asa fanovana ity firenena ity. Izany hoe tsy maintsy manaiky ianao, hiasa hanovana ity firenena ity, izay mila fandresen-dahatra satria asa lavitra ezaka ny asam-panabeazana. Aza mora kivy rehefa manabe fa mila mandrisika ireo mpianatra sy mankahery ny tenanao. Aza hadinoina fa manana andraikitra ianao, ary tsy vitan’ny manabe fotsiny fa mpiasam-bahoaka ianareo, noho izany, meteza ho mpanompo ianareo. Mahaiza manetry tena ianareo ary indrindra tsy mpampianatra fotsiny ianareo fa mpanabe ianareo.”
Mametraka toe-tsain’ny fisandratana
Ilaina ny fiovan’ny toe-tsaina entina hanovana ny firenena, ka manana andraikitra amin’izany mpanabe. Tafiditra amin’izany ny fampianarana ny ankizy ho tia tanindrazana, satria olona mitodika amin’ny firenena isan’andro isan’andro no tadiavina. Fa indrindra ilaina ny mpanabe sy mpampianatra mivoatra isan’andro isan’andro. “Aiza ny andraikintsika mpanabe. Mila manomana olona isika, mila manofana olona isika hampandrosoana ity firenena ity. Mila fahasahiana izany satria manova hatrany amin’ny ifotony isika, ary manana andraikitra lehibe isika amin’ny fitaizana, amin’ny toetra tokony hanana amin’ny maha olom-pirenena. Tafiditra amin’izany ny fahadiovana. Ny fifanajana satria miha-potika ny soatoavina amin’ny lafiny fifanajana ka mila haverina hatrany ifotony. Isan’izany ny fifanajana ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny vahoaka sy ny mpitondra. Ny fikajiana ny tontolo iainana”, hoy ny fanamarihana nataon’ny Filohan’ny Repoblika. Ankoatra ny fiofanana amin’ny maha mpanabe, mila miasa, mila maharaka vaovao ny mpampianatra, mila manaraka fandrosoana, hoy izy. Indrindra amin’izao fanovana ny rafi-pampianarana izao, izay mitodika kokoa amin’ny fanamafisana amin’ny torolalana arak’asa. Tadiavina ao anatin’izay ny hoe, mitondra hatraiza ny fanabeazana, izay hapetraka satria tanjona ny hitarihana azy mankany amin’ny fandraharahana. “Mila fandraisana risika raha te-hivoatra ny firenena fa aza avela ny Filoham-pirenena irery no handray risika fa ianao amin’ny sehatra misy anao mila manao fanovana satria ny asa ihany no fototra ny fahombiazana. Tsy maintsy ny toe-tsain’ny fisandratana no apetraka eto amin’ny firenena, ny hambom-po iombonana sy iraisana no hisandratan’ny firenena, ary mila ihany koa ny toe-tsain’ny fisandratana, ary mifanitsy amin’izay maha mpanabe ny toe-tsain’ny fisandratana hanovana ny lalan’ny tantaran’ny firenena”, hoy ihany ny fanambarany.
Mila mifanome tanana hanandratana ny firenena
“Tantara nikorontana tao anatin’ny fahantrana foana, nikorontana tao anatin’ny ara-politika foana no niainan’ny vahoaka malagasy. Miantso anao aho hiaraka amiko hamily ny tantara. Te-hitondra ny firenentsika tsy hidina intsony fa hiakatra indray ka tantara voahorona ao anatin’ny hambompo izay mafy sy iraisana, ary iombonana no tazantsika rahampitso no tiana apetraka”, hoy ny Filoha raha nilaza tamin’ireo sefo zap amin’ny fahavononany hanarina ny firenena. Noho izany, “ampy izay ny fifanenjehana, ampy izay ny fifandrafiana. Ampy izay ny fahantrana fa mifanome tanana hanandratra. Amboleo toe-tsain’ny fihavanana any amin’ny toerana izay misy anareo any. Izany ny fisandratana voalohany tokony hanananao, ary tazomy izay toe-tsain’ny fisandratana. Mijoroa, mitsangana ary mifanomeza tanana amin’ny fampandrosoana ny firenena fa aoka tsy hifanome tsiny intsony”, hoy izy satria betsaka sahady ireo manakiana be fahatany ny Fitondram-panjakana, ary lazaina fa fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana no natao amin’ny fampivondronana ireo sefo zap ireo eny Iavoloha. “Ny sasany hanome tsiny foana no atao fa efa akaiky ny fifidianana dia avory eny Iavoloha ry zalahy. Izaho dia milaza aminao fa na akaiky ny fifidianana na lavitra ny fifidianana manana andraikitra aminao aho, manana andraikitra amin’ny fanabeazana isika, ary tsy maintsy tafahoana teto isika.” Natolotra tamin’ny fomba ofisialy omaly teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha moa ny “tablettes” sy “kits” entina hampitomboana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ho an’ireo sefo zap ireto. Natrehan’ny minisitra telo misahana ny fanabeazana ary ny minisitry ny Tontolo iainana. Ankoatra ny moto izay efa azon’izy ireo, dia nambaran’ireto mpanabe ireto fa manampy betsaka azy ireo amin’ny asa izay iandraiketany ny fahazoana ireo fitaovana ireo, araka ny fanamarihan-dRandriamahefa, sefo zap Matsakabanja, any amin’ny Cisco Mitsinjo, Dren Boeny. Ity farany izay misahana sekoly miankina sy tsy miankina miisa 17, ary any amin’ny 60km ny elanelany.
Home Improvement dans Ac felis quis tortor malesuada pretium ellente
Travel & Leisure dans Ac felis quis tortor malesuada pretium ellente
Praiminisitra Mahafaly Olivier : Lasibatry ny fanenjehan’ny mpanohitra
Misy karazan’olona tsy sasatry ny manely tsaho hampisavorovoroana ny saim-bahoaka eto amintsika. Lasibatry ny fanenjehana avy amin’ny fanoherana indray koa mantsy ny praiminisitra Mahafaly Olivier tamin’iny faran’ny herinandro iny fa nilazana tany anaty facebook sy ...Tohiny
Raharaha Houcine Arfa : Lasa paradisa fiskaly ve la Frantsa ?
Masoivohon’i Sina : Nanamafy fiaraha-miasa
Home Improvement: You made some decent points there. I did a search on the subject and found most individuals will consent with…
Travel & Leisure: Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable…
Health And Fitness: I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user genial style and…